I-Google Web Stories: Umhlahlandlela Osebenzayo Wokunikeza Ulwazi Olugcwele Ngokugcwele | Martech Zone
Kulolu suku nenkathi, thina njengabathengi sifuna ukugaya okuqukethwe ngokushesha okukhulu futhi okungcono ngomzamo omncane kakhulu.
Kungakho iGoogle yethula eyabo inguqulo yokuqukethwe okufushane okubizwa ngokuthi Izindaba ze-Google Web.
Kodwa ziyini izindaba zewebhu ze-Google futhi zinegalelo kanjani ekuzizwiseni okugxile kakhulu nokwenza kube ngokwakho? Kungani usebenzisa izindaba zewebhu ze-Google futhi ungazidala kanjani eyakho?
Lo mhlahlandlela osebenzayo uzokusiza ukuthi uqonde kangcono izinzuzo zokusebenzisa lezi zindaba zewebhu nokuthi ungazisebenzisela kanjani izidingo zakho.
Yini Indaba Yewebhu Ye-Google?
Izindaba zewebhu zingokuqukethwe kwesikrini esigcwele sewebhu okucebile ngokubukeka futhi kukuvumela ukuthi uthephe noma uswayiphe usuka kwenye indaba uye kwelandelayo. Kufana ncamashi nezindaba ze-Facebook ne-Instagram. Bangu izindaba zewebhu ezingaphezu kwezigidi ezingu-20 eziku-inthanethi seziphelele futhi kusukela ngo-Okthoba 2020, izizinda ezintsha ezingu-6,500 zishicilele indaba yazo yokuqala yewebhu.
Bangahlinzeka ngenye indlela kubathengi abazibandakanya nokuqukethwe ngesikhathi sohambo lwabo lwasekuseni noma beskrola ngokungenanjongo ocingweni lwabo behlezi phambi kwe-telly yabo. Njengebhizinisi, kungasiza ukufinyelela izethameli ozihlosile, ikakhulukazi ngomthelela we-Google.
Kungani Kufanele Usebenzise I-Google Web Stories?
Ngakho kungani usebenzise Izindaba Zewebhu ze-Google? Ziyintuthuko ekusesheni kwe-Google okungaba kuhle kakhulu ekudonseleni ithrafikhi eyengeziwe futhi kunikeze okuqukethwe kwakho kwewebhu ithuba lokubonwa. Kunezinzuzo eziningi zezindaba zewebhu ze-Google ezingavela ngokuzisebenzisa futhi zifanele umzamo odingekayo ukuze zidalwe kusukela ekuqaleni.
Inikeza amandla kumazinga akho - Umncintiswano wokuthola isikhundla emakhasini aphezulu e-Google mubi. Kuphela 5.7% wamakhasi izokleliswa emiphumeleni yosesho eyi-10 ephezulu ungakapheli unyaka ishicilelwe, ngokusho kuka-Ahrefs. Izindaba zewebhu ze-Google zikunikeza ithuba lokubeka kuqala emiphumeleni yosesho. Ukusebenzisa i-Google Web Services, ngokuvamile, kungakusiza ukulinganisa ibhizinisi lakho Emakhasini Omphumela Wenjini Yokusesha (I-SERP). Ukwenza kanjalo kungaletha ithrafikhi eyengeziwe futhi ngethemba, ukuthengisa okwengeziwe!
Okuqukethwe kungabiwa kalula - Enye yezinzuzo ezinkulu zezindaba zewebhu ze-Google ukuthi ungakwazi ukwabelana ngokuqukethwe kalula nabangani ku-inthanethi, umndeni kanye nosebenza nabo. Indaba yewebhu ngayinye inganikeza okuqukethwe okunenjongo umsebenzisi angabelana ngakho kalula ngaphandle kokuthi enze noma yikuphi ukulungisa noma ukuhlela ngaphambi kokuthi achofoze ukwabelana.
Inikeza ukufinyelela okuphezulu - Izindaba zewebhu ye-Google isici esenzelwe ngokukhethekile amawebhusayithi eselula ukuze abukwe. Ngokufana nezindaba ze-Instagram ne-Facebook, inganikeza ithuba elihle lokudala nokwengeza izindaba kumawebhusayithi wabo we-WordPress kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe. Izindaba ziboniswa emiphumeleni yosesho etholakalela izigidi ukuze zichofoze kuyo, kunokuthi nje idlanzana labantu
Ilungele Ukuthuthukisa Injini Yokusesha - Ukwenza ngcono injini yokusesha (SEO) ibalulekile kubantu abaningi nakumabhizinisi lapho bezama ukwenza kangcono ubukhona babo ku-inthanethi. U-70% wabakhangisi be-inthanethi yisho ukuthi ukusesha okuphilayo kungcono kunokusesha okukhokhelwayo okukhiqiza ukuthengisa. Izindaba zewebhu ze-Google zihlanganisa izinqubo ezihamba phambili ngokudala okuqukethwe okuheha kakhulu okungeke kubekwe ezingeni Kusesho lwe-Google kuphela kodwa nangezithombe ze-Google kanye nohlelo lokusebenza lwe-Google.
Izindaba Zewebhu zingenziwa imali - Izindaba zewebhu ze-Google zinikeza ithuba lokuba abashicileli benze imali ngokuqukethwe ngosizo lwezikhangiso ezigcwele isikrini nezixhumanisi ezihambisanayo. Abakhangisi bangazuza nalokhu, banikeze umuzwa obonakalayo kakhudlwana ngevidiyo Ukuxoxa ngezindaba.
Isiza ukulandelela ulwazi lomsebenzisi kanye nokukala ukusebenza - Ngalolu hlobo lokuqukethwe, abashicileli bangakwazi ukulandelela kalula ulwazi lomsebenzisi futhi babavumele ukuthi balinganise ukusebenza kwendaba ngayinye abashaya ukushicilela kuyo. Ungakwazi futhi ukuxhuma lokhu kuzinkundla ezifana ne-Google Analytics, elungele ukuqoqa ulwazi ngokujwayelekile lwewebhusayithi yakho.
Ihlinzeka ngomuzwa osebenzisanayo futhi ogxilile wabasebenzisi bakho - Enye yezinzuzo ezinkulu zezindaba zewebhu ze-Google ukuthi inikeza ulwazi olusebenzisanayo nolujulile kubasebenzisi bayo. Inikeza umshicileli inketho yokufaka izinto ezisebenzisanayo njengemibuzo nezinhlolovo, ezingakutshela kabanzi mayelana nezithameli zakho.
Zibonwa kuphi Izindaba Zewebhu ze-Google?
Izindaba zewebhu zingahlolwa uma ziku-Google kuwo wonke amakhasi azo osesho, i-Google Discover, noma Izithombe ze-Google. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi izindaba zewebhu ze-Google zingabonwa kuphela okwamanje kubasebenzisi base-US, Indian and Brazilian. Kuseyindaba nje yesikhathi kuze kube lokho kunwebeka kude.
Uma unenhlanhla yokuba kwelinye lalawa mazwe amathathu, lapho-ke izovela ekuqaleni kwemiphumela yakho yosesho. Njengoba ifinyeleleka kalula, ngeke ube nenkinga yokuyithola.
Uzenza kanjani Izindaba Zewebhu ze-Google?
Ukudala indaba yewebhu akudingi ukuthi ube nenani elikhulu lokuklama noma ulwazi lobuchwepheshe. Njenganoma iyiphi inkundla yezokuxhumana enesici sendaba, kulula kakhulu ukuyidala. Nawa amathiphu ambalwa ongabhekisela kuwo lapho udala indaba yakho yokuqala yewebhu.
Sebenzisa umhleli obonakalayo - I-plugin yezindaba zewebhu ye-WordPress indawo enhle yokuqala.
Xoxani ngendaba - Dala ibhodi lezindaba bese ubhala phansi izinhloso noma imigomo yakho yokuqukethwe.
Dala indaba yewebhu - Donsa izinsiza zakho ezitholakalayo futhi urekhode / uhlanganise indaba futhi usebenzise umhleli obonakalayo ukuyidala.
Shicilela indaba yewebhu - Shicilela indaba ku-Google futhi ubuke ithrafikhi indiza.
Izibonelo Zezindaba Zewebhu ze-Google
Kuyafaneleka ukuba nezibonelo zezindaba zewebhu ze-Google ukuze kuthi uma unquma ukuzenza ngokwakho, ube nesisekelo sokukhuthazeka ongasebenza kuso. Nazi izibonelo ezimbalwa zokukuqalisa, chofoza ukuze uzivule.
I-VICE ithathe ugqozi kulo bhubhane kanye nalabo abapheka ekhaya ngochungechunge lokupheka oluvalelwa bodwa njengoba kukhonjisiwe ngenhla. Indlela enhle yokunakekela abantu abaningi, hhayi nje izethameli eziqondiswe kubo.
U-Seeker udale le ndaba yewebhu, okuhloswe ngayo ukwabelana ngolwazi lwesayensi kodwa izithombe nombhalo osetshenzisiwe akuzange kunikeze okuningi kakhulu. Kwakusho ukuthi abaningi babezochofoza kuyo ukuze banelise ilukuluku labo.
Isisetshenziswa semfundo senylon esihlinzeka ngendaba yewebhu engenhla sinikeza ulwazi oluguqukayo kubasebenzisi hhayi nje nge-engeli yokubuka kodwa futhi inikeza inani.
Izici zezindaba zewebhu ze-Google ziyindlela enhle yokwabelana ngolwazi ngendlela entsha esebenzisanayo nejabulisayo. Noma ngabe ungumthengi, umshicileli, noma umkhangisi, kunezinzuzo zokusebenzisa ifomethi ye-Google yokuxoxa indaba egxilile eyizindaba zayo zewebhu.
Tags: ukwenza imali ngokuqukethweindaba yewebhu ye-googegoogleizindaba zewebhu ze-googleIndaba yewebhu ye-googleinteractiveukuxoxa indabaukusesha okuphilayoseoinyokaokuqukethwe okwabelwanayookuqukethwe komphakathiukuxoxa izindabaUkuxoxa ngezindabaukulandelelaizindaba zewebhuindaba yewebhuWordPressplugin wordpress